LEGO Old Fishing Store တည်ဆောက်သူသည် BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်မှနှုတ်ထွက်သည်
01 / 04 / 2021 01 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1650 Views စာ0မှတ်ချက် 21310 ဟောငျးငါးဖမ်းဆိုင်, 21319 ဗဟို Perk, အုတ်ခဲ, BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, Ideas, Lego, Lego Ideas, Minecraft, ရော်ဘင်နန်, ရောဘတ် Bontenbal
များအတွက်တာဝန်ရှိပါရမီတည်ဆောက် Lego Ideas 21310 Old Fishing Store မှသူနှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည် BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်.
ရောဘတ် Bontenbal ၏တန်း -Up အတွက်အခြားသုံးဒီဇိုင်းများရှိခဲ့ပါတယ် Ideas BrickLink အသုံးပြုသူများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်မော်ဒယ်များကိုလူစုလူဝေးရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးမည့်ပရိုဂရမ်သည်ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရရှိသောစီမံကိန်းများ Lego အုပ်စု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအကြိုအဆင့်ကိုလွန်။
ဒီဇိုင်နာရဲ့ ရေငုပ်ဆိုင်, လှေအိမ် Diner နှင့် လှေပြုပြင်ရေးဆိုင် အားလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရေပန်းစားသော 21310 Old Fishing Store ၏တူညီသောဗေဒကိုလိုက်နာကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုသို့ဝင်ရန်လိုအပ်သောရောင်းအား ၃၀၀၀ သို့ရောက်ရှိရန်အမြန်ဆုံးမော်ဒယ်များထဲမှဖြစ်နိုင်သည်ဟုစိတ်ကူး။ မရ။
Bontenbal ၏ဒီဇိုင်းသုံးခုစလုံးကို BrickLink မှသိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ဒုတိယစျေးကွက်မှထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ Ideas ဆောက်သူ '' အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများကြောင့် '' အစီအစဉ်မှဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်
21310 Old Fishing Store မှကြီးထွားရန်မျှော်လင့်နေသောပရိသတ်များအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည် cityBontenbal ဒီဇိုင်းများပါသောဆိပ်ကမ်းများ၊ သို့သော်မူရင်း၏သွေးကြောထဲရှိအခြားအစုကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှတွေ့မြင်နိုင်မည်ဟုမဆိုလိုပါ Lego Ideas လွှတ်ပေး 2019 ရဲ့ 21319 ဗဟို Perk ရတဲ့ခံရဖို့ကောလာဟလဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆက်တွဲ ဒီနှစ်, အစောဆုံးတ ဦး တည်းနေစဉ် Ideas အစုံတစ်ခုတစ်ခုအမြဲစိမ်းဆောင်ပုဒ်ဖြစ်စေခဲ့သည် Minecraft.
ကံကောင်းထောက်မစွာ, BrickLink Designer Program ၏ထုတ်လုပ်မှုအကြိုအဆင့်တွင်အခြားစီမံကိန်း ၂၈ ခုကျန်ရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဇွန်လတွင်လူစည်ကားရန်ပုံငွေစင်မြင့်လာရန်အတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းရန်များစွာရှိသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ တစ်ခုလုံးကိုစာရင်းကြည့်ရှုရန် Ideas ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရရှိသည့်စီမံကိန်းများ၊ ဒီမှာသွား BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
← Lego Marvel 40454 Spider-Man ယခုရရှိနိုင် Venom နှင့် Iron Venom နှိုင်းယှဉ်
Lego Marvel 76187 ဂျာမန်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှထုတ်ဖော်ပြထားသောအဆိပ်အတောက်သည် →